BAKALOREA 2020: Nampitomboana avo roa heny ny zandary niaro ny toerana nanaovana ny laza adina - ewa.mg
News - BAKALOREA 2020: Nampitomboana avo roa heny ny zandary niaro ny toerana nanaovana ny laza adina
Cet article BAKALOREA 2020: Nampitomboana avo roa heny ny zandary niaro ny toerana nanaovana ny laza adina est apparu en premier sur déliremadagascar.
L’article BAKALOREA 2020: Nampitomboana avo roa heny ny zandary niaro ny toerana nanaovana ny laza adina a été récupéré chez Délire Madagascar.
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Décision N°3633/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 15 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Haute Matsiatra dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.L’article Décision N°3633/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 15 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Haute Matsiatra dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Minisitra Lalatiana Andriatongarivo : « Tsy tokony hisy fiangarana amin’ny sosialim-bahoaka »
Raikitra avy hatrany fa tsy an-kiandriandry ny fidinana ifotony ataon’ny eo anivon’ny mpikambana amin’ny governemanta sy ny faritra ary ny kaominina, omaly. Anisan’ny nosahanin’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina ny eny amin’ny kaominina Tan­jom­bato sy Ankaraobato. « Natao handrindrana ny fomba fiasa vaovao amin’ny fizarana ny fanampiana avy amin’ny fanjakana ho an’ireo tena sahirana izao. Havaozi­na ny lisitra hisorohana ny fitangoronana ary tsy tokony hisy ny fiangarana sy fitani­lana amin’izany fizarana izany », hoy izy. Nitafa mi­vantana sy nitondra fanazavana mom­ba izany ny tenany ary nanambara fa maro ireo tsy nisitraka izany satria tsy tafapetraka ny mason-tsivana ho an’ireo to­kony hahazo. « Henon’ny fanjakana ny fitarainanareo ka antony nametrahana izao fom­ba fiasa izao », hoy ihany izy. Nanteri­ny fa tokony ho voajery avokoa ary miainga amin’izany ny lisitra ka tokony ho hita ao ireo mpanao asa an-tselika, ny mpivarotra amoron-dalana, ny mpanofa trano tapaka asa, ireo very asa… Tokan­trano hatramin’ny 24.400 no vinavinaina ho vitaina mandritra ny fakana ny anaran’ny loham-pianakaviana, mialohan’ny hamoahana ny lisitra ofisialy. Fokon­tany miisa dimy, va­kim-paritra 26, ahitana tokantrano 15.000 no hatao ao amin’ny kaominina Tanjom­bato. Fokontany miisa fito, vakim-paritra 17, ahitana to­kantrano 9.400 kosa ny eny Ankarao­bato.Synèse R.L’article Minisitra Lalatiana Andriatongarivo : « Tsy tokony hisy fiangarana amin’ny sosialim-bahoaka » a été récupéré chez Newsmada.
Azo ampiasaina amin’ny fifanakalozana vola eo amin’ny tsenambola iraisam-pirenena ny volamena. Midangana ny vidiny sy ny sandany amin’izao fotoana isian’ny krizy momba ny vola ateraky ny Covid-19 izao. Voakasik’izany ny volamena eto an-toerana fa indrindra koa ny any ivelany sy ny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.Eto Madagasikara, manodidina ny 200 000 Ar ny vidin’ny volamena iray grama eo amin’ny tsena ofisialy avoakan’ireo matihanina iraisam-pirenena amin’ny tsenambolamena. Maherin’ny 240 000 Ar ny iray grama raha karazana 24 carats (tsara sy ambony kalitao), vidiana 182 000 Ar raha 18 carats, ary 81 000 Ar raha 8 carats. Manodidina ny 80 000 Ar hatramin’ny 120 000 Ar ny vidiny handraisan’ny mpanangona volamena any amin’ireo mpitrandraka any ambanivohitra rehetra any satria tsy mbola voafaritra ny kalitaony (carats) na ambony na ambany. Manodidina ny 160 000 Ar hatramin’ny 200 000 Ar kosa any amin’ireo mpanefy firavaka eto an-toerana.Mihen-danja ny dolaraEo amin’ny tsena iraisam-pirenena, vao mainka midangana ny vidin’ny volamena. Misanda 1 957 dolara ny vidin’ny volamena 1 once (1 once= 28,35 grama), vidiny ambony indrindra eo amin’ny tsenambolamena iraisam-pirenena, ary mety hihoatra ny 2 000 dolara any amin’ny tsena aziatika. Nahatonga izany ny krizy Covid-19 ka nidina ny sandan’ny vola dolara amerikanina, sady eo koa ny ady toekarena eo amin’i Etazonia sy i Sina, mikasika an’i Hong-Kong.Marihina fa efa manodidina ny 1.900 Ar koa ny sandan’ny iray dolara amin’izao fotoana izao. Njaka Andriantefiarinesy L’article Krizin’ny Covid-19: tafakatra 200 000 Ar ny volamena 1g a été récupéré chez Newsmada.
Ben’ny Tanàna Andriantsitohaina – Tanin’ny CUA: « Azo ravana ny fifanarahana tamin’ny MBS satria tsy voahaja… »
Valin-kafatra tamim-pitoniana sady tsotra ary mazava. « Azo atao ny mandrava ny fifanarahana satria tsy voahaja izany », hoy ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Andriantsitohaina Naina, omaly. Nitondra fanazavana manoloana ny resabe amin’ny hakan’ny CUA ny taniny eny Anosipatrana, iorenan’ny MBS, ny mpitantana ny Renivohitra. Mirefy 2 500 metatra toradroa izany ary ahitana ny « pylone » sy ny trano lehibe, ahitana birao maromaro.Tokony handoa hofany 40 tapitrisa ArNotsiahiviny fa natao ny fifanarahana fony ben’ny Tanàna Ravalomanana, niainga tamin’ny fifanarahan’ny mpanolontsaina tamin’izany.Nohavaozina indray izany ny taona 2016, fony ben’ny Tanàna Ravalomanana Lalao. « Tsy tafiditra tao anaty lahadinika fa natao any amin’ny samihafa izany ka tsy ara-dalàna ny fanapahan-kevitra », hoy ihany Andriantsitohaina Naina.Tsy vitan’izany fa roa tapitrisa Ariary isan-taona ny hofany, saingy ampahany kely, valo tapitrisa Ariary, ihany no naloan’ny MBS ny volana novambra teo. « 20 taona anefa izay ka tokony handoa ny hofany 40 tapitrisa Ar. izy ireo », hoy ihany ny ben’ny Tanàna.Tsy misy resaka politika na fanenjehena MBSNanteriny fa tsy misy mihitsy idiran’ny resaka politika izany rehetra izany ary tonga ny fotoana hakan’ny CUA ny tany. « Fanatsarana ny asan’ny kaominina no ataonay izao. Hitsinjovana ny kitapom-bola ary sady ampiasain’ny mpiasan’ny CUA io toerana midadasika io. Tsy misy idiran’ny resaka haino aman-jery koa izany fa diso ny fanejehana. Manana enim-bolana izy ireo hamindrana ny MBS. Vonona ho amin’ny fifampiresahana amin’ny mpitantana amin’ny hifindrany ny CUA », hoy izy.Ankoatra izany, nambaran’ny ben’ny Tanàna koa fa misy fitrandrahana vato « kariera » eny Ambohimahitsy RN2 nampiasain’ny orinasan’ny filoha teo aloha, ny Alma. « Nifanarahana fa omena ny kaominina ny 5% amin’ny vato. Tsy nisy anefa izany na vato iray aza. Efa nijanona ny asa eny ka hohatsaraina ny toerana », hoy izy.Tsena lehibe mahazaka mpivarotra 1 000Momba ny etsy amin’ny Esplanade Analakely, miteraka resabe koa amin’izao fotoana izao, nambaran’ny ben’ny Tanàna fa hanorenana fivarotana mahazaka mpivarotra maherin’ny 1 000 eo an-toerana. « Ahitana tsena lehibe misy rihana roa izany. Hohatsaraina koa ny « pavillon » etsy Analakely ». Efa vita ny fanarenana ny Zaimaika », hoy izy.Synèse R.L’article Ben’ny Tanàna Andriantsitohaina – Tanin’ny CUA: « Azo ravana ny fifanarahana tamin’ny MBS satria tsy voahaja… » a été récupéré chez Newsmada.
Tsy fandriampahalemana: misesy ny vonoan’olona any Melaky
Nampiaka-peo, omaly, ny fikambanan’ny Terak’i Melaky (Fitem), tarihin’dRavalinandrasana Maurice fa mihoa-pampana ny tsy fandriampahalemana ao amin’ny faritra Melaky.Mila ho isan’andro ny fanafihana sy vonoan’olona any an-toerana. Ny 26 oktobra teo, izay nahafaty ny ben’ny Tanàna tao Marohazo. Efa hatramin’ny 27 septambra no nihorohoro ny mponina ao Melaky satria nisy ny famonoana ny mpiasan’ny tetikasa Sahan’Ala, anisan’ny mitondra fampandrosoana any. Ny 28 sy 29 septambra ihany koa dia nisy ny vonoan’olona mahatsiravina tamin’ny kaominina tao Melaky. Tamin’ny 8 oktobra teo, novonoin’ny olona koa ny mpiasan’ny tetikasa Framaprod. Ny volana jona, maty nisy nitifitra ny ben’ny Tanànan’Andreha.Saro-dalana sy lavitra andrianaSady saro-dalana no anjakan’ny tsy fandriampahalemana ny faritra Melaky ka mahatsiaro ho tanàna lavitr’andriana tanteraka. Izany indrindra no hanairan’ny Fitem ny fanjakana foibe mba hidina ifotony hitondra vahaolana amin’ny fampandriana fahalemana any an-toerana.Nanamarika ny fikambanan’ny Ampelan’i Melaky, Rafiringa Aurelia fa ireo olona malaza toy ny ben’ny Tanàna sy mpiasa amin’ny tetikasa ireo misy mamono ireo fa toa matimaty foana ny hafa, izay tsy fantatra kanefa iharan’ny tsy rariny ihany koa any ambadika any ka hiantsoana mafy ny fanjakana mahefa.Efa nisy ny dinan’i Melaky teo aloha ka azo heverina ny mamerina izany raha mahomby rehefa voadinika mazava sy ankatoavin’ny fitsarana indray ny fampiharana azy, hoy hatrany ny Fitem.Efa maro ihany koa ny “operation” nataon’ny andiana mpitandro filaminana tany Melaky, saingy very anjavony izany fa miverina hatrany ny habibian’ny dahalo rehefa lasa ireo mpampandry tany.Tatiana AL’article Tsy fandriampahalemana: misesy ny vonoan’olona any Melaky a été récupéré chez Newsmada.
Fiatrehana ny Covid-19: mitaky hatrany ny tambin-karamany ireo “paramédicaux”
Tsy nisy mpiasan’ny fahasalamana nisitraka « indeminté de réquisition » hatramin’izao. Didin’ny lalàna manan-kery ny fanjakana izay niantso ny mpiasan’ny fahasalamana hiady amin’ny Coronavirus hanefa izany. Mbola ao anatin’ny fanatanterahana ny antso manokana nataon’ny fitondrana hiasa hiady amin’ny valanaretina Coronavirus ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fahasalamana rehetra ahitana ny mpitsabo sy ny « paramédicaux » ary ny mpandraharaha samihafa noho ny hamehana ara-pahasalamana. Nanomboka ny 22 marsa lasa teo izany « réquisition » izany ary mihatra hatramin’izao. Voafaritry ny lalàna manan-kery fa misy karama ho an’ny olona voaantso manokana mandritra ny fe-potoana hiasany, araka ny fanazavan’ny filohan’ny sendikàn’ny paramédicaux, Ralibera Jerisoa, omaly teny amin’ny HJRA. Hatramin’izao, tsy nisy mpiasa iray nisitraka izany « indemnité de réquisition » izany fa « prime » ny nozaraina, tsy ho an’ny mpiasa rehetra koa fa ampahany ihany. Mampahatsiahy ny fanjakana ny adidy tsy vitany ny mpiasan’ny fahasalamana ary nampahafantatra ny mpikambana ao amin’ny sendika SISFM fa manana zo hahazo io karazana « indemnité » io izay rehetra niasa. Manodidina ny 30 000 Ar ka hatramin’ny 36 000 Ar isan’andro eo ho eo ny sora-bola rehefa manatanteraka asa manokana ny mpiasa iray ka tokony ho ny vaomiera manokana napetraka no manapaka farany.« Efa nisy ny dingana niresahana momba ny « indemnité de requisition » tamin’ireo mpitantana ny minisitera fa tsy nisy valiny azo tsapain-tanana », hoy ny mpitarika ny sendikà. Mamerina ny fitakiana izy ireo, omaly. Tsy mametraka fe-potoana hanefan’ny fitondrana ny « indeminté » ny mpiasan’ny fahasalamana. Hisy ny filankevitra nasionaly amin’ny fiandohan’ny volana desambra ka eo no hanapahana hevitra momba ny tohin’ny fitakiana raha tsy misy valiny. Lalana hizoran’ny fitakiana ny fahatongavana amin’ny fitokonana sy ny fampitsaharana ny asa rehefa tsy mahazo fahafaham-po ny mpangataka.Zava-dehibe ny fampahafantarana izay zo izay ho an’ny mpikambana rehetra taorian’ny fahataperan’ny hamehana ara-pahasalamana.Vonjy A.L’article Fiatrehana ny Covid-19: mitaky hatrany ny tambin-karamany ireo “paramédicaux” a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – “Can 2022”: mety hatao any Ghana ny lalao miverina: Barea sy Elefanta
Mbola tena ao anaty baraingo tanteraka. Tsy mbola fantatra na afaka mandray ny lalao miverina hikatrohan’ny Barea sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, eo amin’ny fifanintsanana ny “Can 2022”, ny eto Madagasikara.Mety ho any amin’ny firenen-kafa tampoka raha tsy voavaha ny olana. Tsy afaka misioka aloha, hatreto, ny Malagasy satria tsy mbola tafavoaka ny ala amin’ny fandraisana ny lalao miverina hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, andro fahefatra hifanintsanana ny “Can 2022”. Fihaonana tokony hotanterahina any amin’ny kianja Stadium Barikadimy Toamasina, ny 17 novambra ho avy izao, izany.Anton’izany ny mbola fikatonan’ny sisin-tany malagasy. Hiankina amin’ny filoham-pirenena tanteraka izany ny hahazoan’i Madagasikara mandray na tsia io lalao io. Hangataka fahazoan-dalana manokana, homena ny delegasiona ivoarianina, mantsy ny FMF, hahafahan’izy ireo miditra eto hanatontosana ny fihaonana eo amin’ny roa tonta.Marihina fa nandefa taratasy any amin’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf) ny federasiona ivoarianina (FIF), noho io tsy fisokafan’ny sidina mihazo an’i Madagasikara io.Kianja tsy an’ny atsy na aroaNangatahin’izy ireo ny hanaovana ny lalao miverina amin’ny firenena hafa. Nanolo-kevitra ny hanaovana mihitsy izany any Ghana izy ireo. Tsy mbola namaly io fangatahan’ny Ivoarianina io anefa aloha, hatreto, ny Caf. Nampahatsiahy fotsiny ity rafitra misahana ny baolina kitra afrikanina ity fa raha misy ny olana amin’ny fanatontosana ny lalao, tsy maintsy tanterahina any amin’ny iray amin’ireo firenena mifaninana ny lalao mandroso sy miverina, na hatao amin’ny kianja tsy an’ny atsy tsy an’ny aroa.Anaty krizy politika ny any Côte d’IvoireTsiahivina fa ny 12 novambra ho avy izao ny lalao voalohany, tanterahina any Abidjan. Raha ny vaovao heno, tsy milamina ihany koa anefa ny any Côte d’Ivoire amin’izao fotoana izao, noho ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana sy ny krizy politika.Tsy mbola naneho hevitra momba io tsy fandriampahalemana any an-toerana io aloha, hatreto, na ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) na ny mpanazatra, i Nicolas Dupuis. Tompondaka sy Synèse R.L’article Kitra – “Can 2022”: mety hatao any Ghana ny lalao miverina: Barea sy Elefanta a été récupéré chez Newsmada.